Emphakathini wanamuhla ayabaluleka ezibalulekile ikakhulukazi izimfanelo zomuntu njengoba ukuzimela, ikhono bathuthukise amakhono abo, funda sanda isizinda solwazi. Futhi ngokuya ihogela yemfundo, kuhlanganise pre-school, awukwazi angasondeli, eqinisweni it yakha ezazidingeka ukuze ukuqhubeka izingane. Umkhakha omusha umsebenzi izingane zasenkulisa nokucwaninga ungaphakathi zasenkulisa, ziqondiswe ulwazi izinto zobujamo kanye izenzakalo emvelo nge nombono wabo ngqo. Ukuqeqeshwa okunjalo ndlela iphumelela kakhulu.
Nokucwaninga eqenjini wokulungiselela
Umnyaka ofanele kakhulu kuqale lolu hlobo yomsebenzi engqondweni yethu kuyinto nenkathi eyiminyaka engu-5-6. Ngakho-ke, nokucwaninga ephumelela kunazo eqenjini wokulungiselela enkulisa. Kule nkathi isifundo - engokwemvelo ngenqubo ingane. Ucwaninga konke okwenzekayo emhlabeni, kodwa ngokuvamile iningi kwenzeka ngobudlabha. Baqeqeshelwa amakilasi nokucwaninga e ingane zasenkulisa ungathuthukisa ukuqonda kwethu nezwe elalimzungezile abathakazelayo nokuthile ababengambeka kungenzeka ukuthi akazange ihlangabezane ekuphileni kwansuku zonke.
Thishela kulokhu isihloko kwethonya into (umfundi), bese uba nawo ilandelana, kucwaninga nekuhlelembisa ukufunda mayelana ndawonye. Injongo amakilasi ezifana eqenjini wokulungiselela - ukusiza ingane yakho:
ukuqoqa ulwazi oluphelele kakhulu.
Lezi izinkinga nomntwana olele zone yentuthuko proximal, okungukuthi, angeke okwamanje kwenziwe kubo ngokwabo.
Nokucwaninga e zasenkulisa GEF - ngenkuthalo ekuthuthukiseni indawo zasenkulisa pedagogy, amasu athize zidalwe futhi ihlolwe nursery yesimanje. Othisha ukwakha isimiso sabo ukuqeqeshwa okusekelwe imigomo abanayo kanye nezinhloso.
Izinhloso nobuchwepheshe izinselele
Nokucwaninga eqenjini wokulungiselela - kuyingxenye ebalulekile emsebenzini yobuchopho. Inani layo likhulu kakhulu. I wokulungiselela iqembu - izingane ubudala zasenkulisa enisezweni zasenkulisa ngonyaka odlule. Ngakho, lezi amakhono nolwazi ngesisekelo ukuze ngiyoqeqeshwa ngokwengeziwe. Izingane zasenkulisa nokucwaninga linemigomo ezilandelayo:
ukudalwa izimo for kumiswa isithombe yengane ephelele emzungezile izinto kanye izenzakalo;
ukuthuthukiswa sphere ngokomzwelo-esibalulekile somuntu;
kwandzisa silulumagama kanye nolwazi jikelele umthwalo;
ekuthuthukiseni ikhono elihle lokukhulumisana nabanye, ikhono sebenzisana nontanga yabo futhi uthisha.
Ukuqaliswa kwalawa izinto ngeke aphumelele kakhulu ukwedlula more inqubo ehlelekile yolwazi eyakhelwe kanye nokuxhumana kahle kwengane kanye omdala.
umsebenzi ngamunye has umgomo oqondile, kuhlanganise izingane zasenkulisa zokucwaninga. Imiphumela kufanele ibe ingabonakali. Kuyini ngempela afuna othisha, liqhuba engavamile futhi enjalo imisebenzi ezithakazelisayo eqenjini wokulungiselela? Waba yini umphumela wesibindi inqubo yemfundo kufanele kube ngale ndlela:
Ezinganeni, ke liyathuthuka, basebenzisa amagama ngaphezulu isichazamazwi yayo asebenzayo.
Inani izwe elizungezile, imvelo iba ephakeme njengoba eduze nengane izilwane zasendle ifunda ukuqonda izidingo izitshalo nezilwane kanye bayazwelana nabo.
Njengoba sasisebenza, delineating kwenkululeko imisebenzi, enifeza umsebenzi wakhe nalowo ndawonye yonke idatha ngoba umphumela, izingane ziqala ukuxhumana kahle kakhulu.
Izwe umfanekiso experimenters abasha ayisekho siqukethe izinto ngabanye kanye nemicimbi, it is iguqulwe ibe isakhiwo ngalokulingene.
Ngamanye amazwi, lo preschooler uqala elibanzi ukuhlola zonke elilizungezile, kusukela izinto kubantu, futhi lokhu kuyosisiza kakhulu kuye empilweni omdala esizayo.
Okudingekayo - emehlweni
Iyini indawo nokucwaninga e zasenkulisa? Enkulisa, kutilolonga imfundiso ezintsha, njalo ifakwe izinto ezifanele. nokucwaninga endaweni zasenkulisa kufanele libe izinto zokwakha ukuthi asetshenziswa inkambo umsebenzi. Olufanele kanye imifanekiso: uvivinyo wesifunda, incazelo kanye izakhiwo isithombe bese izimfanelo izinto. Exposure akufanele kube static: izingane ngokushesha baphelelwe isithakazelo yini njalo emehlweni. Option ezifanele kakhulu kungaba embukisweni thematic sizofunda. Ngosuku lapho sitadisha izakhiwo odonsa ekhoneni ukuhlola atawutadishelwa hhayi izinto kuphela, kodwa futhi amasampula ngezinto ezihlukahlukene futhi nezinye izinto ezifana ipulangwe, ipulasitiki, iraba, amaminerali, njll
Ngokuvamile, indawo nokucwaninga eqenjini wokulungiselela kumelwe nakanjani ziqukethe konke okudingekayo ukuze sihlole nesisindo, ukukhangana, isikhathi, elula amakhemikhali ukusabela kanye izenzakalo ngokomzimba. Iningi lawo abantu izinto zansuku zonke ukuthi sisebenzisa ekuphileni kwansuku zonke.
Yini kahle hle ugcwalise endaweni nokucwaninga eqenjini wokulungiselela? Ngo Nei kufanele babekhona:
Tara. Konke egcinwe izinto, reagents kanye amasampula. Ngokwengxenye namakani kakhulu, amabhokisi kanye amabhodlela kufanele eyenziwe ngepulasitiki. Ungasebenzisa womtholo, iziqukathi metal. I ingilazi kufanele futhi kugwenywe ngenxa yethuba anda yokulimala. Izingane naphula izimbiza usengozini futhi Imi okuseceleni okubukhali. Ngalezo zinsuku, uma into cwaningo kuyoba ngokunembile ingilazi, zonke izikhonzi zalo ezibonakalayo okufanele iboniswe kuphela khona uthisha zasenkulisa.
Iqoqo ngezinto zemvelo. Ungasebenzisa konke okusizungezile. Okusanhlamvu, amasampula enhlabathi: .. Sand, ubumba, ukhuni noma ingadi umhlabathi, amatshe, amagobolondo, njll Suit namatshe bobunjwa ezithakazelisayo kanye nemibala, Izigaxa, izimbali omisiwe noma herbaria, kanye izitshalo bukhoma ezimbizeni. Ngaphezu izitshalo kumele sibonise izingane nezilwane: hamster yezinyoni, izinhlanzi aquarium - kumnandi ukubukela, ungakwazi ukuwondla futhi ufunde okuningi.
Ukuqoqwa iphepha, izindwangu, UTJHAPHISA nezinye ukwakheka ezithakazelisayo.
Magnets angusayizi ohlukile futhi amandla, kanye sufaka.
Izibani, izibani, amakhandlela kweminye imithombo ukukhanya.
Esikhombe ngenani izingane okungenani eyodwa ngesibonakhulu futhi omabonakude.
udayi Safe (ungathatha ukudla).
Thermometer (akukho mercury), pipettes, imijovo ngaphandle izinaliti.
Balloons, iphepha noma ezacile indwangu tape (ukunquma isiqondiso komoya).
Amathawula, usula, amaphinifa, scarves, uwoyela indwangu noma yendwangu izindwangu lokumboza amatafula ucwaningo.
izincwadi thematic, imifanekiso, imidwebo we ucwaningo.
Amamitha isikhathi: iwashi nge umcibisholo, isihlabathi, ilanga, amakhalenda.
Izikali: electronic futhi classical, ezinesisindo kancane.
Mirrors, okungcono luhlaka plastic kanye substrates - zithanda ukuba nzima ukugqashula.
Ukwakhela eqenjini wokulungiselela
Ukwakhiwa njengoba uhlobo lokuhlola uphelele izingane ezineminyaka engu-5 kuya ku-6 iminyaka. Iqembu ukulungiselela lo msebenzi - inkundla ekahle: Ojahidada abathanda basebenzisane izinto kanye namafomu, ukwazi ukuthi kwenzeke nalabo abanye kakade ukwenza okuningi bebodwa, futhi ngaleyo ndlela bathuthukise amakhono abo. Futhi iqiniso lokuthi ngeke ngibe nesibindi sifunde ukwenza ngosizo abafundisi.
Ukwakhela eqenjini wokulungiselela sihlose ukunwetshwa ukubukwa wengane phezu Izakhiwo lezinto. Ukudala nalo ekuthuthukiseni (ikhono ukucabanga ngalokwakhako nangaphandle ibhokisi).
Futhi, qiniseka ukuthi wakhuliswa ngokomzwelo-value sphere lezi izikhathi. Abafundi ukhumbule lapho, kunoma iyiphi wangempela zenzeka izenzo, bona belingisa ekilasini, futhi ufunde ukuhlonipha abantu abasebenza. Ngokwesibonelo, ukwakha indlu aphume amabhlogo, preschooler umsebenzi uqobo iphathelene imisebenzi umakhi, umakhi. Futhi egijima ukwakhiwa indunduma ngamasondo, uzicabangela yena unjiniyela imoto isitshalo. Futhi Kutfutfukisa zokwenziwa ukucabanga bajule. Kid kufanele ifanelane isikimu Umklamo ikusasa indaba for lasungulwa, ukuze correlate izenzo zabo nge imiyalelo bese elamukelekile.
amakilasi okuyisibonelo izindikimba
Izingane nesithakazelo konke ebazungezile, bazimisele ukufunda utho, ukuhlola futhi ucwaningo nge izinto futhi izinto. Umsebenzi we uthisha - nokumisa ulwazi lwabo, izindlela kanye nemisebenzi kufanele kube letindzala lefanele, kunika tihlokwana. Nokucwaninga eqenjini wokulungiselela ihlanganisa zonke izici zokuphila - kusukela izinzwa womuntu ukuze ukuya emkhathini.
Njengengxenye lesi sifundo izingane zofunda rocks, basuka kuphi, yini, kanjani abantu ziyasebenza. Kubalulekile ukukhuluma mayelana ayigugu futhi ephuma kabili esiyigugu, izinto zokwakha kanye nabanye. Sisebenzisa entabeni ezahlukene nasemifantwini yamadwala, okuyinto zingafani color, ukuthungwa, isisindo nokunye. D. Amanye amatshe akhe ingalungiswa kusengaphambili, futhi eminye abuthele sishaywe, nokugcina isithakazelo zezingane ukuze opytnicheskoy imisebenzi.
Esikhathini okuthuthukiswa ngayo umongo wendaba ngeke kufaneleke ukuba sifunde izifundo mayelana izinsalela zamathambo asendulo (limestone, wokulinganisa, amalahle, coral), izinhlobo inhlabathi kanye umthelela wabo izimo zezulu (umoya, ukushisa, amakhaza).
Amanzi kanye izakhiwo zalo
Amanzi - a impahla kakhulu ucwaningo nezingane. Kungaba ukufriza kalula, shabalala, upende noma isiphuzo. Uchungechunge lwemfundo izifundo phezu kwamanzi iqembu wokulungiselela inikeza ulwazi mayelana nendawo yayo ubunjalo, indima izakhiwo emvelweni ibhalansi, ngokomzimba futhi amakhemikhali. Esikhathini esizayo, isihloko ingaqhutshezwa, kubhekwe abakhileyo ezilwandle, emachibini nasemifuleni, kokuba okuxoxwe inkinga ukungcolisa imizimba amanzi emhlabeni. Izingane kufanele ukufika khona esiphelweni mayelana isidingo sokulondoloza izindlela amanzi sipho ahlanzekile ukulondoloza ekhaya.
Isihloko kwembulwa kancane kancane, ngendlela elandelayo:
isandla womuntu (njengoba uhlaka touch, indlela yokuqonda nezenzo ukuthatha);
Isikhumba (ukuzwela yayo ilanga noma amanzi yokusabela lapho amalahle noma ukupholisa sengozini);
izindlebe noma ikhala yini (umsebenzi, ukubaluleka, ukuze kulondolozwe izincomo impilo yabo).
Ubuhlobo uzibuthe, izici zayo kanye nokuxhumana into nge ezinye izinto.
La makilasi amadlingozi kakhulu, abazi ngisho zifane ucwaningo, kodwa amaqhinga ngempela. Magnets ukusebenzisa nawo ngomunye nomunye, noma okuphambene nalokho, bacondze etindzaweni letehlukene, basondela emoyeni, ngale kwetafula, iphepha noma ngezidwedwe. ukunakekela okukhethekile izingane zingasizwa bakhangwa yokuthi insimbi bavezwa lesi silingo leyo nto futhi ngokwengxenye ukuthola impahla yayo.
Ground. Isihlabathi nobumba
Ucoca lokufanako nalokwehlukile emkhatsini wezinhlobo ezihlukahlukene zenhlabathi, ukuthungwa yayo, izakhiwo, ukubunjwa, izindlela zokusebenzisa abantu. Lesi sigaba ku izinhlobo ezahlukene isihlabathi (emfuleni, olwandle, omkhulu, encane, umcako, ukwakhiwa) nobumba (ophuzi, obomvu, omnyama, blue, white, zobumba, wezokwelapha nokunye. D.). Prototypes kungenziwa oncibilikiswe amanzi, sieved, isikhunta kuhlanganise izibalo kanye nokuhlaziya umphumela.
Thishela wetfula izingane kuya izakhiwo emoyeni, indima yayo ukuthi abantu nazo zonke izinto eziphilayo. Indlela esobala kunazo zonke ukufunda kule nto kuyoba Balloons. Zibonisa ukunyakaza emoyeni kuze kudabuke umhlane, fluff, izimpaphe nezinye izinto ukukhanya. Awudingi lutho exotic - ngisho ukotini amabhola noma wads kwezicubu iphepha ongakhonza le njongo.
Njengengxenye ye-izifundo on the subject iphathwa emoyeni isisindo isilinganiso ngaphansi kwamazinga ahlukahlukene okushisa: liyaphuma efudumele phezulu futhi yehla abandayo.
Sun futhi isikhala
Uthisha unika izingane ukuqonda sokuqala sonozungezilanga, isakhiwo yayo, ukuthi amaplanethi yilezi ukubanda kokuphonswe yibo remoteness kusukela maphakathi. Lapha ungakwazi ukukhuluma ngemithala, kuhlanganise notation zabo ezingokomfanekiso. Izingane ungacabanga ngokwabo isikhala abahambi enisezweni weightlessness.
Ugesi njengoba okwakuvela ohlotsheni olukhethekile lwenkanyezi amandla futhi kumadivayisi asebenzisa kuso - lokho isihloko lesi sikhathi. Izingane ukhumbule futhi uhlu nemishini ekhaya namathoyizi abanabo, futhi cabanga ushayela yini kubo. Eceleni ingasaphathwa ingozi kagesi, okuyinto "ligijima izintambo", kanye nokuphathwa ezifanele zazo zonke ehlangene nalo.
Phakathi kwesifundo kungasetjenziswa izingane zofunda umbala, njengoba kuvela ngesikhathi ibonisa ukukhanya imisebe ethile. Sethula umqondo bohlu, okuyinto ingacaciswa ngesisekelo nothingo.
Ngaphambi kokuthi uqale, noma ngisho ukuhlela noma iyiphi sifundo, kufanele sicacise ukuthi hlobo luni umphumela okufanele alethe ngokufundisa lesi sifundo. Nokucwaninga eqenjini wokulungiselela DOW iyathinteka. Into ebaluleke kakhulu ukuba uthisha - ukufundisa izingane ukuzicabangela, ukwenza iziphetho, ukuqonda ubudlelwano imbangela nemphumela. Kubalulekile zonke yokufunda, nokufunda ngamunye wethu abe esaphila.
Asinakuwushalazela ingxenye kokuziphatha inqubo yemfundo. Kubalulekile ukuze bagxilise ezinganeni uthando kwemvelo ngokumangalisayo nangokunembile ebazungezile, ikhono kanye Isifiso sokulondoloza ebumsulweni nasebunyeni futhi ukuhlonipha bangasephula.
izingane zanamhlanje, abafundi leqembu wokulungiselela - isizukulwane bayophila, ukwakha, baziqambela futhi bathande engamashumi amahlanu ezayo. Kubalulekile kakhulu abazozenza kusukela zasebuntwaneni, iziphi iziphetho zazo ngokoqobo ezizungezile.
othisha umsebenzi ingafaniswa imisebenzi tuners zomculo: benza, futhi melody ngeke imiphefumulo kobuntwana futhi ikusasa lethu ezivamile uzwakale.
Abantu abahamba ngezihlalo ezinamasondo "Indigo" 2 1: ukubuyekezwa, izici, amanani
Imibhalo for ukubhaliswa lokuzalwa - kubalulekile ukwazi njalo umzali!
Imfumbe ethakazelisayo isihlahla
I ukuzilibazisa isikhungo "Shepalovo" (Primorye) kanye nezinye izikhungo kuze kube iholidi ngaphambi umndeni
Iphunga kuvuze lamafutha geranium
Khahlela izinyawo zabo ukuba unciphise umzimba futhi sibalo enhle. Indlela ukukhahlela izinyawo zabo?